Obbo Taayyee Danda'aa: "Waraanni Ardaayitaa akka faca'uufi finciluuf hojjetamaa ture" - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Taayyee Danda'aa: "Waraanni Ardaayitaa akka faca'uufi finciluuf hojjetamaa ture"
Taayyee Danda'aa haala waktaawaa fi dhaabilee siyaasaa biyya keessaa irratti yeroo ibsa miidiyaaleef kennu.
Gara fuulduraatti ODP'n paartilee naannicha keessatti hojjetan waliin kallattii sadiin hojjeta jedhan, Obbo Taayyee Danda'aa haala waktaawwaa fi hariiroo paartilee siyaasaa irratti har'a ibsa miidiyaalef kennaniin.
Dhimmoota waqtaawaa fi hariiroo dhaabbilee siyaasaa irratti ibsa kan kennan waajjira giddu galeesaaa ODPtti hogganaan damee yaada uummataa fi sab qunnamtii uummataa Obbo Taayyee Danda'aa, ABO'n loltootnisaa Ardaayitaatti leenjirra turan akka fincilanif kakkaasaa tureera jedhan.
''Waraanni Ardaayitaa akka faca'uu fi finciluf hojjetamaa ture" ODP.
ABO'n gochaalee kunneen ergama fudhatee raawwataa jira kan jedhan Obbo Taayyeen, dhimmi lammiileen saba biroo loltoota kunneen keessa jiru jedhus dhimma mirkanaa'aa akka ta'e himan.
Gaaffii fi deebii ajajaan waraana Lixa Oromiyaa Kumsaa Dirribaa [Marroo] BBC waliin taasise irratti ammoo waraana isaanii keessa Oromoota irraa kan hafe sabni biraa akka hin jirre dubbatan.
Akkasumas ABO'n gama isaan haala leenjii fi nageenya waraana isaa Eertiraa irraa biyya galee leenjiif Ardaayitaa seenee hubachuuf, miseensota keenya erginee akka hin galleef dhorkamaniiru jechuun komatee ture.
Gama biraatin komii ABO'n qabiyyee leenji kennamu irratti kaasaa tureef loltootni kunneen heera biyyattii fi mirga namoomaa fi dimokiraasii leenji'aa turan jedhan.
'ABO'n waraana haaraa leenjisaa jira'
Gama biraatin rakkoon biyyattii keessa ture olaantumaan murnaa, olaantummaa seeraan akka bakka bu'u gochuun dhimma waloo dhaabbilee siyaasaa biyyittii keessaa akka ta'e himan.
Obbo Taayyeen, biyyattii keessatti dimokiraasii dhugoomsuu kan jedhus dhimma dhaabbilee siyaasaa kunnen walitti fidu akka ta'e dubbatan.
Kana malees jaarmiyaaleen dimokiraasii qaama hundaaf tajaajila haqaa akka kennan gochuu fi diinagdeen biyyattii miidhame akka dandamatu gochuunis dhimma dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa fi guutuu biyyattii keessatti argaman waliin irratti hojjechuu qaban akka ta'es himan.
Yeroo ammaa kana dhimmootni lama uummata keenyaaf ijoo dha kan jedhan Obbo Taayyeen, ejjannoo tokkummaan uummata Oromoo dhugoomuu qaba jedhu ni qabna jedhan.
"Nageenya naannichaa mirkaneessuunis dhimma dursummaa itti kenninu ta'ullee, dhimmoota lamaan kunneen irratti ABO malee dhaabbileen siyaasaa hundi waliigalanii hojjechaa jiru" jedhan.
Dhimma fooramii paartilee siyaasaa Oromoo irrattis dhaabni ABO hirmaachaa akka hin jirre dubbatan.
Jiraattonni Naqamteefi Shaambuu yaaddoo nageenyaa guddaa keessa jirra jedhu
'Biyya galuun ABO nageenya biyyattiif abdii guddaa ta'ullee itti fufuu hin dandeenye'
Gara fulduraattis kallattiilee sadin dhaabbilee siyaasaa biroo walin hojjenna jedhan.
Isaanis dhimmoota waloo irratti qindoominaan hojjechuu, dhaabbilee siyaasaa kaayyoo walfakkaataa waliin qabnun walitti makamuu fi dhaabbilee biroo waliin karaa nagaatin wal morkuudha jedhan, Obbo Taayyeen.
Kana malees ODP'n paartii Jeneraal Kamaal Galchuun hogganamu, Paartii biyyaalessaa Oromoo fi kan Abbaa Nagayaan hogganamu, ABO Tokkoome walin makamuuf adeemsarra akka jiru himaniiru.
Wal dhabdee mootummaa fi ABO gidduu jiru hiikuuf kaleessa marii irra kan turan Abbootiin amantaa fi Abbootiin Gadaa karaa nagaa xumuruuf torban dhufu gara Wallagga Lixaatti imalu.
Imala isaanii kanaanis 'osoo hin milkaa'iin hin deebinu' ejjennoo jedhu qabatanii akka jiran miidyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru.
Aduwaatti 'dhukaasa loltoota Ertiraan' lubbuun namaa dabre